Daniel Defoe | Akwụkwọ ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 10/10/2021 12:00 | Ndị edemede, Akụkọ ihe mere eme, Akwụkwọ, Novela
Daniel Defoe, onye edemede na onye nta akụkọ Bekee nke narị afọ nke XNUMX a ma ama, mụrụ otu ụbọchị dị ka taa site na 1660. Onye chepụtara nke ọma Robinson crusoe, dabere na akụkọ mere eme, ọ bịanyekwara aka n'akwụkwọ akụkọ dịka na Njem Captain Captain Singleton o Moll Flanders, nke nwere ike bụrụ akwụkwọ akụkọ mbụ na -elekọta mmadụ n'akwụkwọ Bekee, gbasara ndụ akwụna. Ndị a bụ ụfọdụ iberibe ahọpụtara nke ha icheta.
1 Daniel Defoe - Nhọrọ nke iberibe
1.3 Diary nke afọ ọrịa
1.4 Njem Captain Captain Singleton
1.5 Roxana ma ọ bụ onye nwere ihu ọma
Daniel Defoe - Nhọrọ nke iberibe
N'ime ụgbọ mmiri ahụ, ahụrụ m mkpịsị akwụkwọ, ink, na akwụkwọ, m wee mee ike m niile ịzọpụta ha; mgbe ink dịgidere, enwere m ike idekọ akụkọ ihe mere eme, mana mgbe ọ gwụchara, ahụrụ m na enweghị m ike ịga n'ihu, ebe enweghị m ike ịme ink n'agbanyeghị ihe niile m nwara. Nke a bịara igosi m na achọrọ m ọtụtụ ihe na -abụghị ihe m chịkọtara. Ebe m jisiri ike mụta mmụọ m ntakịrị ka ọ dị ugbu a wee hapụ omume nke ileba n'oké osimiri anya ma ọ bụrụ na m hụ ụgbọ mmiri, etinyere m onwe m n'ọrụ site na mgbe ahụ gaa n'ihu ịhazi ndụ m na ime ka ọ dị mma ka o kwere mee. Emere m okpokoro na oche.
Ọ bụ eziokwu na, site na mgbe mbụ m malitere inwe mmekọrịta mụ na ya, ekpebisiri m ike ikwe ka ya na ya dinaa, ọ bụrụ na ọ tụọrọ m ya; mana ọ bụ naanị n'ihi na achọrọ m enyemaka ha ma amaghịkwa ụzọ ọzọ m ga -esi mesie ya obi ike. Mana mgbe anyị nọkọrọ n'abalị ahụ, na, dịka m kwuworo, anyị gara oke oke, ahụrụ m adịghị ike nke ọnọdụ m. Enweghị m ike iguzogide ọnwụnwa ahụ, a kpalikwara m inye ya ihe niile tupu ọ rịọ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ mara m mma nke na ọ nweghị mgbe o jidere m ihe a n'ihu m, ma ọ bụ n'oge ọ bụla o gosipụtaghị ntakịrị iwe na omume m, mana na -eme mkpesa mgbe niile na afọ juru ya na ụlọ ọrụ m dị ka awa mbụ anyị na ya nọ. , M pụtara ọnụ na bed.
Diary nke afọ ọrịa
Mana, dịka m kwuru, n'ozuzu akụkụ nke ihe agbanweela nke ukwuu, ịkwa ụta na iru uju ka a na -ese n'ihu niile; na ọ bụ ezie na ihe otiti adịghị emetụta ụfọdụ agbata obi, o yiri ka onye ọ bụla nwere nsogbu nke ukwuu; Ka anyị hụrụ ọrịa na -aga n'ihu kwa ụbọchị, onye ọ bụla weere onwe ha na ezinụlọ ha n'ihe egwu kachasị. Ọ bụrụ na ọ ga -ekwe omume ịnye nkọwa ndị kwesịrị ntụkwasị obi oge ndị ahụ nye ndị na -ebibeghị ndụ ha, na inye onye na -agụ ya echiche zuru oke banyere oke egwu juru ebe niile, ọ gaghị ada ada inwe echiche ziri ezi n'uche ha na ju ha anya. Enwere ike ikwu na London niile na -ebe akwa; Ọ bụ eziokwu na n'okporo ụzọ ị nweghị ike ịhụ akwa iru uju, n'ihi na onweghị onye ọbụla, ọbụlagodi ndị ikwu ha kacha nso, yi uwe ojii ma ọ bụ yiri uwe ọ bụla weere dị ka iru uju; mana a na -anụ olu mgbu ebe niile.
Njem Captain Captain Singleton
Ka anyị na ndị Negro anyị na -achọ ihe oriri na ọla edo, onye na -akpụ ọla na -egbutu ọnụ ọgụgụ na -arịwanye elu site na efere ọla ọcha na igwe ya. Ọ bụrụla aka ochie ma mee ezigbo ọrụ nka, nke na -anọchite anya enyí, agụ, nwamba nwamba, enyi nnụnụ, ugo, nnụnụ, okpokoro isi, azụ, na ihe niile gafere n'echiche ya. Ọ fọrọ nke nta ka ọlaọcha na ígwè gwụchaa, n'ihi ya, ọ malitere ịrụ ọrụ na ọla edo a kụrụ akụ nke ukwuu.
Roxana ma ọ bụ onye nwere ihu ọma
N'ikpeazụ, ọ ka lọtara ugboro ugboro gbasara ego mmachi akpa m, ebe ọ bụ na ọ dị mkpa ịgbaso usoro ụfọdụ ka m nwee ike ịnakọta ya na -arịọghị nkwado onye isi oge ọ bụla. Aghọtaghị m nke ọma nkọwa nke ịwa ahụ, nke were ihe karịrị ọnwa abụọ iji rụọ ya, mana, ozugbo edoziri ihe niile, onye na -egbu mmanya kwụsịrị ka ọ hụ m n'otu ehihie wee gwa m na Onye isi ya zubere ileta m abalị, n'agbanyeghị na ọ chọrọ ka a nabata ya n'echeghị echiche. Akwadebere m ọ bụghị naanị ọnụ ụlọ m, kamakwa mụ onwe m, wee gbaa mbọ hụ na onweghị onye nọ n'ụlọ mgbe ọ bịarutere belụsọ onye na -egbu mmanya ya na Amy.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Daniel Defoe. Afọ ncheta ọmụmụ ya. Ụfọdụ iberibe